Zvakavanzika zvekunaka chokoreti - Afrikhepri Fondation
Verenga: 5 min
Vkana kwemakore ayo ndinonzwa ndine mhosva kwemaawa nguva zvisingawanzo kuti ndinoisa zino rangu pachiyero chekokoreti. Urongwa hwepasi rose hwakadzika muhuropi hwangu pfungwa yekuti "chokoreti inopa acne", tisingatauri nezve kosi calories, cholesterol nemhango. Iyi inguva yekusiyana kubva pane izvo zvinorambidzwa; kana chokoreti-yakavakirwa chokoreti iri kuputika muzvitoro zvinodhaka, pamwe hazvina kuipa.
Zvinyorwa zvepod mbeu
Kana tichitaura nezve chokoreti isu tiri kutaura pamusoro pekocoa, asi ngatizvitarisei, izwi rekuti "chokoreti" rinonyanya kuita zvebonde uye rinonakidza kupfuura "cocoa". Cocoa, saka, yakazara nevitamini A, B, C, E uye zvicherwa - potasium, magnesium, iron, calcium nemhangura. Um, sei ndisina kuzombodya chokoreti zvakare? Ah hongu, acne ...
Nhasi, vezvehutano vanokurudzira kubatanidza chokoreti mukudya kwemazuva ese, uine zano rimwe chete: usashandise zvisina kunaka. Uye iyi ndiyo yega njodzi ine chokoreti; ukangotanga zvakaoma chaizvo kumira.
Yambiro! Chokoreti haina kukurudzirwa kune vanhu vanotambura nekufutisa (kuwanda kwesimba kudya) kana chirwere cheshuga (yakawandisa mashuga nemafuta). Kune rimwe divi, zvinokurudzirwa kune vanhu vanotevera yakaderera koriori chikafu: kuchimbidzika kuisirwa, chokoreti inotumira iyo uropi iko nekukurumidza kunzwa kwekunakidzwa uye kuguta izvo zvinokonzeresa kukanganisika nekuda kwekuwedzera kushomeka. Ziva zvakare kuti chokoreti yakasviba ine yakaderera glycemic index, ndokuti, inochengetedza huwandu hweshuga yeropa nguva dzose uye nekudaro kunonoka kutanga kwenzara.
Chokoti izere nemeno
Unogona kuzviona zvakasuruvarisa, asi neruzivo rwechizvino-zvino rwesainzi, "Usadya chokoreti, uchave nemaburi", haugone kuzviita nekutenda kwakanaka kuvana vako: matanini aripo. mucocoa inobatsira kudzivirira maburi nekudzora kukura kwedombo. Nei Colgate isiri kuchinjisa pfumo rechokoreti?
Chokoti shomanana, zvakawanda zvinofadza
Kocoa ine caffeine - kagumi kushoma pane kofi kunyange - uye theobromine, imwe inonakidza. Izvi zvinhu zviviri, zviripo mune zvidiki zvidiki, zvine simba rekusimudzira, izvo zvinogona kubatsira munguva dzekuongorora kana basa rakasimba. Cocoa zvakare ine anti-kuora mwoyo uye anti-kushushikana zvinhu (theobromine uye serotonin). Chokoreti inozivikanwa kuva neanti-depressant maitiro uye inogadzira kunzwa kwekufara; hazvisi pachena kana izvi zvinokonzerwa nechokoreti pachayo kana manzwiro ainoita, asi hazvina basa. Iko kunakirwa kwekudya chokoreti kunokonzeresa kuwedzera mu endorphin, iyo yekunakidzwa kemikari, uye kutyaira kushushikana uye kusagadzikana kure. Kunze kwezvo, kungopinda mufekitori yechokoreti kunoita kuti unzwe zvirinani!
Inogona kutaridza surreal, asi chokoreti iyi yaunopomera matambudziko ese etsono pachiyero chako mune zvemashiripiti zvemufananidzo wako: caffeine. Iyo inoderedza cellulite, inoita kuti ganda riwedzere uye rinodzima iyo orenji peel kutaridzika.
Chokoti zvisikwa zveganda rako
Mira kusanzwisisika nhamba 1: acne inokonzerwa nemahormone zvinhu, kwete kunyanyisa kushandiswa kwechokoreti. YOUPIIIIIIII! Ah, zvinofadza sei kunzwa mashoko akanaka! Ini ndatove zvirinani: iyo lipids iri mukocoa ruomba inovaka iyo epidermis, inyorovesere uye ibatsire ganda kumutsirazve, ichipa hunyoro uye kupenya. Kocoa ine zvinhu zvekuporesa, izvo zvinonyanya kushanda mukudzivirira uye kurwisa kutambanudza mamaki Kupfuura tei iyo inozivikanwa nokuda kwehuwandu hwayo, cocoa yakazara mukurwisa rusununguko radical antioxidant polyphenols, iyo inoshandiswa nemiti yezvigadzirwa zvemugadziri muzvirwere zvinopesana nekwegura.
Yakatsanangurwa chokoreti recipe yeganda rakaputika
Unoda… 2 mativi echokoreti rakasviba, uye ndizvozvo! Ive nekuchenjerera, ingoshandisa chokoreti yemhando yepamusoro: tarisa kuti yakavimbiswa 100% yakachena cocoa bota, kuti hapana chakawedzerwa chemakemikari, uye zvinosarudzika sarudza ine yakakwira muzana cocoa (80 %). Iwe unogona kuwedzera donhwe remaranjisi maruva akakosha mafuta. Pisa chokoreti mune bhaira rakapetwa, uye sanganisa kuti uwane paseti yakatsetseka. Rega kupora kusvikira mukanyiwa uchidziya kwazvo, kuti urege kuzvipisa. Nyorera kumeso kwemaminitsi makumi maviri uye sukurudza zvakanaka. Ganda rakaguta uye rakapurwa
Runako nebhicoa bhizinesi
Zvakawanda uye zvakanyanya zvikuru zvigadzirwa zvekushambadzira zviri kugadzira cocoa-yakavakirwa mitsara yekuchengetedza. Iyo Yekunaka Shopu, Sephora, Kunzwa Chocolat… Kune mamwe kunyange chokoreti zvigadzirwa zvinogadzirwa pane supermarket masherufu! Zvakanakira kushambadzira zvingave zvisina kunaka kuzviramba; gourmet yevakadzi vese vatengi vatotorwa moyo uye vakapindwa muropa neizvi zvigadzirwa.
Sezvo sainzi iratidzira iyo anti-kushushikana mhedzisiro yechokoreti, mamwe ma spas uye thalassotherapies vakaiwedzera kune avo akasiyana marapirwo. Aya ndiwo mabudiro akaita fashoni nyowani: chokoreti kurapa. Inosanganisira kuputira uye kukwiza muviri necokoreti kupfeka iyo, inosanganisirwa nemafuta akakosha, inokunyudza muhukama hwakasimba, inomutsa moyo wako wakanaka, uye, iyo icing pakeke (chokoreti ehe saizvozvo), inoita yako ganda rakapfava. Nhasi, anodarika mazana maviri masangano muFrance anoita cocoa-based runako kurapwa: panofanirwa kuve neako padhuze newe. Ndiudze kana iwe waedza imwe, pasina kukanganwa zita nekero kana zvaive zvakanaka!
Cocoa Butter 100g - 100% Yakachena uye yakasikwa - Isina kutsanangurwa - Zvirinani kune iro Ganda - Bvudzi -...
Tenga € 12,99
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Ndira 18, 2021 9:28 PM